မယ်မြန်မာ …. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » မယ်မြန်မာ ….
Posted by z-Z on Sep 19, 2011 in Aha! Jokes, Satire | 16 comments
မြန်မာနိုင်ငံကြီး ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေရဲ့ အထင်ကြီးလေးစား မျက်နှာသာပေးမှုများ ရရှိလာပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ဖီဖာ ကတောင် ၂၂၀၀ ပြည့်နှစ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံကို ကမ္ဘာ့ဖလား အိမ်ရှင်နိုင်ငံ အဖြစ်လက်ခံစဉ်းစားပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံရသည်အထိ မြန်မာ့ ဘောလုံးအဆင့်အတန်းဟာ မြင့်မားခဲ့ရပါတယ်။ မြန်မာလူမျိုးဆိုရင် ဘယ်နိုင်ငံသွားသွား မျက်နှာပွင့် အခွင့်အရေးတွေရ နဲ့ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ မျက်နှာ အပွင့်ဆုံး လူမျိုး ဖြစ်လာပါတယ်။
ခုလည်း မယ်စင်္ကြာဝဠာ ပြိူင်ပွဲကြီးကို မြန်မာနိုင်ငံက အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပလျှက်ရှိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြု မြန်မာ့ကျေးလက်တောရွာမယ်ပြိုင်ပွဲ ချန်ပီယံ မယ်မြန်မာဟာ နောက်ဆုံးအဆင့်ကို မယ်အီသီယိုးပီးယား ၊ မယ်ယူအက်စ် တို့နဲ့အတူ တက်ရောက်သွားပြီး အကျိတ်အနယ် ယှဉ်ပြိုင် လျှက်ရှိနေပါတယ်။ နောက်ဆုံးမေးခွန်း မေးရမယ့်အချိန်ရောက်နေပါပြီ …. နောက်ဆုံးအဆင့် ကိုတက်ရောက်လာနိုင်တယ်ဆိုကတည်းက သုံးယောက်လုံးရဲ့ အရည်အချင်းကလည်း မတိမ်းမယိမ်းပါဘဲ။ ဒိုင်က မေးခွန်းစမေးပါပြီ …… အင်္ဂလိပ် အက္ခရာ “L” နဲ့စတဲ့ တိရိစ္ဆာန် တစ်ကောင် ကိုပြောပြပါ ….
မယ်ယူအက်စ် စဖြေပါပြီ …… Lion … မှန်ပါတယ် …….
နောက် မယ်အီသီယိုးပီးယားဖြေပါတယ် …….. Lizard …… ပရိတ်သတ်များလည်း လက်ခုပ်တီး ပြီး အားရပါးရအားပေးကြတယ် …. ( ကြည့်ရတာ အီသီးယိုးပီးယား မယ်ကို တော်တော်ခိုက်ကျတယ်ထင်တယ် :D)
မယ်မြန်မာ ဖြေပါတော့မယ် …… တစ်လမ်းချင်း ရှေ့ကို ထွက်လာပါပြီ ……. Hello….. testing … testing …. ( မိုက်ကိုစမ်းပါတယ် … ရွာအကျင့် ကမပျောက်ဘူး ….. :D ) ဖြေပါပြီ … လိပ် …. ဒိုင်တွေ ခေါင်းကြီးသွားတယ် … အိမ်ရှင်ဆိုတော့ အခွင့်အရေး ပေးရတာပေ့ါ… ပြန်စဉ်းစားပါအုံး လိပ်က “ L “ နဲ့စတာမဟုတ်ဘူးလေ …. နောက်တစ်ခါ ထပ်ဖြေဖို့ အခွင့်အရေးပေးမယ် ပြန်ဖြေ .. (မပေးလို့ကလည်းမရ ယူစရာရှိတာ ယူပြီးပြီကိုး …. )
မယ်မြန်မာက .. မပြင်ဘူး လိပ် ပဲ … စာလုံးတောင်ပေါင်းပြလိုက်သေးတယ် late = လိပ် ….. ဒိုင်တွေညစ်သွားတယ် …
ဒါဆို နောက်မေးခွန်း တစ်ခု ပြောင်းမေးမယ် သုံးယောက်လုံးပြန်ဖြေရမယ်… ဒီတစ်ခါ အင်္ဂလိပ် အက္ခရာ “ L “ နဲ့စတဲ့ အသီး တစ်ခုခု ပြော ………
မယ်ယူအက်စ် ဖြေတယ် ………. Lemon ……
မယ်အီသီယိုးပီးယား ဖြေတယ် ….. lychee ..
မယ်မြန်မာ ဖြေတယ် … လိမ္မော် …. စာလုံးတောင်ပေါင်းပြလိုက်သေးတယ် ( lanemaw ). ဒိုင်တွေညစ်သွားသည် … မျက်နှာတော့ အပျက်မခံနိုင်ဘူး … နောက်ဆုံးတစ်ကြိမ် အခွင့်အရေးပေးလိုက်မည် ဟု တိုင်ပင်လိုက်သည် …. ကဲ ရှေ့ကမေးခွန်းတွေက နဲနဲ ခက်တော့ အမှတ်တွေသိပ်မကွာဘူးဖြစ်နေတယ် … နောက်ဆုံးအနေနဲ့ မေးခွန်းတစ်ခု ကို ထပ်ဖြေရမယ် … အဖြေမှန်တဲ့သူ မယ်စင်္ကြာဝဠာ ဖြစ်မယ် …. ဟုကြေငြာ လိုက်သည် ။ ဒိုင်တွေက မယ်မြန်မာနားကိုကပ်ပြီး တီးတိုးမှာနေသည် … ဒီမေးခွန်းက နောက်ဆုံးနော် မှန်အောင်ဖြေလိုက်တာနဲ့ အနိုင်ရမှာ …. …. ကဲစလိုက်အောင် .. ဒီတစ်ခါတော့ “ L “ နဲ့စတဲ့ လခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုကို ဖြေရမယ် ……..
မယ်ယူအက်စ် ဖြေတယ် …. Lips …
မယ်အီသီယိုးပီးယား ဖြေတယ် ….. Liver ……
မယ်မြန်မာ ဖြေတယ် …… လဥ …. :D :O
၀ါး.အားအား.. G’d Idea!
အဲဒါနဲ့ ဒိုင်တွေက နောက်ဆုံးရဲ့နောက်ဆုံး ထပ်မေးတယ်။ မိန်းမတွေအတွက် Lနဲ့စတဲ့ အရေးအကြီးဆုံးအရာကဘာလဲ။ (ဒိုင်ကလူလွှတ်ပြီး တိုးတိုးလေး အဖြေပြောထားတယ် LOVE တဲ့)
မယ်ယူအက်စ် – LUST (ရမ္မက်)
မယ်အီသီယိုပီးယား – LOBSTER (ကျောက်ပုဇွန်ထုပ်ကြီး..ကုန်းတွင်းပိတ်အာဖရိကနိုင်ငံသူလေ)
မယ်မြန်မာ – စဉ်းစားမရနေလို့ ဒိုင်လူကြီးက လက်ချောင်းနဲ့ အသဲပုံစံလုပ်ပြတာမြင်ပြီး ဝမ်းသာအားရ ဖြေလိုက်ပုံက “လင်”
ဦးကြောင် က လက်စသတ်တော့ ဒိုင်ဖြစ်နေတာကိုး …..
မီးပျက်သွားလို့ နောက်ဆုံးပိုင်း မကြည့်လိုက်ရဘူး …
တော်တော်ကို ဗဟုသုတ စုံလင်စွာ ရရှိသွားပါတယ်။ မယ်မြန်မာဖြေတာက ကံကောင်းလို့… အဟိ ရယ်ရတယ်။ လေးကြောင်ဖြေတာက အဖြေမှန်လားမသိဘူးနော်။
ဇာဂနာ က တော့ အထဲရောက်နေလည်း ကြောင်ကြီးရေးတာတွေဖတ်ရ့င် သိပ်စိတ်ပူမှာမဟုတ်တော့ဘူး၊
သူလိုလူ နောက်တစ်ယောက်ရှိပါလား ဆိုပြီး …
ဟားဟား မြန်မာကွ လာမစမ်းနဲ့ ဟိဟိ ဒိုင်လူကြီးတောင်အရှုံးပေးရမယ် ဘာမှတ်လဲ ဒိုင်လူကြီးကကို ပိန်းတာပါ
ဖတ်နေရင်း မေးခွန်းတွေ လိုက်ဖြေကြည့်နေတာ
အောက်ဆုံး က အဖြေ ကို ဖတ်လိုက်ရမှ ပဲ
တော်တော်နောက်တဲ့ ဇက်ဇက် ပဲ
ကိုယ်တိုင်ရေးထားတာလား … fwd မေးတွေထဲမှာ ဖတ်ပြီးကတည်းက ရယ်ရတဲ့ ဟာသမို့လို့ မှတ်မိနေကြောင့်လေ ။ :D
အမှန်အတိုင်းပြောရရင် fwd mail တော့မရဘူးပါဘူး …
သူများတွေ ပြောပြ တာ ကြားဘူးလို့ ရေးလိုက်မိတာပါ ….
….. ပြောပြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း …
မြန်မာနိုင်ငံမှာပြုလုပ်တဲ့ Miss Universe Final round ဖြစ်ပါတယ်၊
Miss USA, Miss Malaysia and Miss Myanmar တို့ကို မေးခွန်း(၃)ခု
တင်ဆက်သူ: ပထမမေးခွန်းကတော့ အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ “L” နဲ့စတဲ့
Miss Myanmar: LAY DIO
ဒိုင်လူကြီး : အိုး..နိုး.. Radio က letter “L” နဲ့မစဘူးလေ
တင်ဆက်သူ: ဒုတိယမေးခွန်းကတော့ letter “L” နဲ့စတဲ့
Miss Myanmar: LABBIT
Judge: အိုး..နိုး.. Rabbit က letter “L” နဲ့မစဘူးလေကွယ်
တင်ဆက်သူ: အခုမေးမဲ့ နောက်ဆုံးမေးခွန်းကတော့ letter “L”နဲ့စတဲ့ အသီးတစ်မျိုးရဲ့
Miss Myanmar, (ယုံကြည်မှုအပြည်နှင့်ပြောလိုက်သည်) : LAIN MAW
ဒိုင်လူကြီး. ( အိုး.မိုင်ဂေါ့ )
ဒိုင်လူကြီးတွေနဲ့အကဲဖြတ်အဖွဲတွေဟာ Miss Myanmar ကို
Miss Myanmar လေးအားလည်း အရှက်တကွဲ အကျိုးနည်းမဖြစ်စေချင်သည်ကတစ်ကြောင်း ၊
Miss Myanmar လေးမှာ letter “L” နှင့်ပတ်သက်ပြီး
တင်ဆက်သူ: OK, အခုနောက်ဆုံးမေးခွန်းကတော့ လူမှာ letter “L” နဲ့စတဲ့
Miss USA: Lung (လက်ခုပ်သံများ)
Miss Malaysia: Liver (ပိုများသောလက်ခုပ်သံများ)
Miss Myanmar: LA U
ဒိုင်လူကြီး: ?????????!!!! (;_;)
Miss Congeniality – Burma – Myint Myint May
တကယ်တော့. .. မယ်စကြာဝဌာပြိုင်ပွဲ.. မြန်မာဝင်ပြိုင်ပြီး.. ဆုတခုရဖူးတယ်..။
၁၉၆၀ က..မြင့်မြင့်မေ တဲ့..။
၁၉၆၁ မှာလည်း ၀င်ပြိုင်တယ်..။ မြင့်မြင့်ခင်..
အဲဒီဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်ဟာ.. အခုရန်ကုန်က.. အောင်အောင်အင်တာပရိုက်စ်ပိုင်ရှင်ရဲ့.. ဇနီးပေါ့..
မြင့်မြင့်မေ ဖြစ်လိုက် … မြင့်မြင့်ခင်ဖြစ်လိုက် .. ခင်မြင့်မြင့်ဖြစ်လိုက်နဲ့ … ၀ူးးးးးးးးးးး နားမလည်တော့ဘူး
ကိုမောင်(ကျော်သူ)မိန်းမ မရွှေဇီးကွက်ပါနော် (ထပ်ရှုပ်အောင်လို့ပြောပေးတာ)
လွန်စွာမှပင် သဘောကျမိပါသဖြင့် အားရပါးရ၊ ခွက်ထိုးခွက်လှန် ရယ်မောသွားပါသည် ခင်ဗျာ… :D